Bosch brushcutters को लागी सस्तो नायलॉन लाइन स्पेयर पार्ट्स कसरी बनाउने - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> मर्मत >> कसरी बॉश brushcutters को लागी सस्तो नायलॉन लाइन प्रतिस्थापन गर्न
छविमा व्यक्तिहरू जुन मेशिनको लागतको साथ आउँदछन् Units 25 सेमीको १० एकाईहरूको प्याक त्यो हो, meters मिटरको लागि २€ डलर जबकि कुण्डलीले cost० वा meters० मिटरको लागि १० डलर खर्च गर्दछ। त्यहाँ धेरै भिन्नता छ।
मैले यी २ किनें
3mm नायलॉन धागा
यदि तपाईं सक्षम हुनमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ भने नायलॉन थ्रेड स्पूलको कुनै ब्रान्ड प्रयोग गर्नुहोस् म तिमीलाई दुई तरिकाहरू छोड्दछु।
बोल्ट पुन: प्रयोग गर्नुहोस्
यदि हामीले स्पेयर पार्ट्स देख्यौं भने उनीहरूसँग सानो अल्युमिनियम बोल्ट छ। मलाई थाहा छैन के हुन्छ यदि हामी काटिएको केबल सीधा राख्छौं भने के हुन्छ। यो कसरी हुन्छ देखेर, मलाई लाग्छ कि जब यो केही घाँसमा समातिएमा यो चिप्लन्छ र टाउकोबाट बाहिर आउँदछ। यसैले हामी बोल्टको पुनः प्रयोग गर्न लाग्दछौं।
म परिवर्तनको साथ एक भिडियो छोड्छु
यदि तपाईं फोटोसँग चरण-चरण प्रक्रिया हेर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंसँग यो छ।
केहि तोता नाक फ्ल्याक लिनुहोस्, र विरूपण हटाउनुहोस्। हामी बाँकी थ्रेड पाउन सक्छौं जुन हामीले छोड्यौं
र तपाईंले भर्खरै नयाँ काट्नुपर्नेछ, घुसाउनुहोस् र फेरि थिच्नुहोस् ताकि यो पर्ची नपरोस्।
विश्वव्यापी हेड किन्नुहोस्
यो अर्को राम्रो विकल्प हो। हामीले हाम्रो मेसिनको साथ अर्को सार्वभौमिक वा अनुकूल हेड खरीद्यौं र अब हामी कुनै पनि प्रकारको थ्रेड प्रयोग गर्न सक्छौं। यस प्रकारको टाउकोको मूल्य €5र € 15 को बीच छ।
यस तरिकाले हामी कुनै पनि धागामा परिवर्तन गर्न सक्दछौं जब हामी चाहन्छौं। मैले किनेको छु यो यद्यपि मैले यो प्रयास गरेको छैन
टाउकोको साथमा मैले 3,5.mm मीमी ब्रेडेड तार किनिदियो र स्टिलको लेप पनि लेखाए कि यो राम्रोसँग काम गर्दछ किनकि मलाई लाग्छ कि यसले धेरै कम लगाउनेछ।
मलाई डर छ कि स्टीलको रूपमा केही अनावश्यक स्पार्क उफ्रिनेछ, तर जब म प्रयास गर्छु म तपाईंलाई बताउँछु।
के एक इलेक्ट्रिक brushcutter यसको लायक छ?
यो त्यस्तो प्रश्न हो जुन धेरै मानिसहरूले मलाई कसलाई सोध्छन् कि मैले एक इलेक्ट्रिक किनेको छु?
म यसको जवाफ दिन चाहन्छु किनकि यो त्यस्तो चीज हो जुन मलाई बारम्बार सोधिन्छ।
सधैं जस्तो उत्तर यो निर्भर छ। यो तपाईलाई चाहिएकोमा निर्भर गर्दछ। म यसलाई २ बाढीको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न जाँदैछु, जहाँ म विस्तार बिना समस्याहरू बिना जडान गर्न सक्दछु। काम सकिसकेपछि म यसलाई कारको घरमा राख्छु र एउटा कोठामा राख्छु। र यो सराहना गरिन्छ कि यो पेट्रोल र तेलले दागिएको छैन, यसले गन्ध पाउँदैन र यो मूर्ख देखिन्छ भने पनि, यो सराहना गरिन्छ कि तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्दा यसले अत्यधिक हल्ला गर्दैन।
तर तपाइँले के खरीद गर्नुहुन्छ भनेर जान्नुपर्दछ, यस विशेष मोडलको मामिलामा (बॉश एएसएफ २ - -) 23) तपाइँले यसलाई काम गर्नको लागि सुरक्षालाई निरन्तर कडा पार्नु पर्छ र यो केही बोझिल हुन्छ। तर बाँकी पूर्ण छ।
यदि तपाईंलाई सामान्य पावरको साथ मेसिन चाहिएको छ भने, तपाईंले यसलाई वातावरणमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं समस्या बिना यो जडान गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंलाई केही चीज चाहिन्छ जुन हल्का हल्ला हो र दाग नहोस् (ताकि कारलाई दाग नलाग्नुहोस् वा जब म यसलाई राख्छु) घरमा) ठीक छ, इलेक्ट्रिक तपाईंको सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो।
यदि तपाईंलाई बिजुली बिनाका ठाउँमा पुर्‍याउनु पर्छ भने, तपाईंलाई धेरै शक्ति चाहिन्छ, 1CV भन्दा बढि
पेट्रोल र तेलको बारेमा सचेत हुन आवश्यक छैन
यो सँधै जडान हुनुपर्दछ र तपाई स्वतन्त्रता गुमाउनुहुन्छ
तपाईं यसलाई बिजुली बिना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न
त्यहाँ पेट्रोलमा जत्तिकै शक्तिशाली कुनै मोडेल छैन
यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने तपाईं मलाई टिप्पणीहरूमा सोध्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म यो शीर्षक विस्तार गर्न सक्दछु एक ब्रश कटर खरीद गाइड.
विभाग मर्मत टिकट नेभिगेसन
1 बोल्ट पुन: प्रयोग गर्नुहोस्
2 विश्वव्यापी हेड किन्नुहोस्
3 के एक इलेक्ट्रिक brushcutter यसको लायक छ?